I-Semalt Expert Iphakamisa kwiiwebhusayithi zoLwazi lweZiko lokuThula
I-Web ukuhlutha iquka umsebenzi wokuqokelela idatha yewebhu usebenzisa i-web crawler . Abantu basebenzisa izixhobo zedatha yokukhutshwa kwedatha ukuze bafumane ulwazi olubalulekileyo kwiwebhusayithi enokufumaneka kwi-export into kwelinye idolophu yokugcina isitoreji okanye idata elikude. I-software ye-scraper ye-scraper isixhobo esingasetyenziselwa ukukhawulela nokuvuna ulwazi lwewebhusayithi njengezintlu zemveliso, i-website yonke (okanye iinxalenye), umxholo kunye nemifanekiso. Uyakwazi ukufumana nayiphi na into esemgangathweni kwiwebhusayithi ngaphandle kwe-API esemthethweni ekujonganeni nedatha yakho.
Kule nqaku ye-SEO, kukho imigaqo eyisiseko apho izixhobo zedatha yokukhutshwa kwedatha ziyasebenza. Unako ukwazi ukufunda indlela isicabangca esikwenza ngayo inkqubo yokukhawulela ukugcina idatha yewebsite ngendlela echanekileyo yokuqokelela idatha yewebhusayithi. Siza kuqwalasela isixhobo sokukhutshwa kwedatha yeBrickSet. Le ntsika iyi-website ejoliswe kuluntu equlethe ulwazi oluninzi malunga neeseti ze-LEGO. Kufuneka ukwazi ukwenza i-Python yokukhupha ithuluzi elisebenzayo elingahamba kwiwebhusayithi yeBrickSet kwaye ulondoloze ulwazi njengoko isetekethi isetha kwisikrini sakho. Le web scraper iyanda kwaye ingabandakanya ukutshintsha kwexesha elizayo ekusebenzeni kwayo.
Ukuze omnye enze iProthon web scrapper, udinga indawo yokuphuhliswa kwendawo yePython 3. Le ndawo yendawo yokusebenza yiPython API okanye iTech Development Kit ukwenzela ezinye iindawo ezibalulekileyo kwesoftware yakho yewebhu. Kukho amanyathelo ambalwa angayilandelayo xa wenza le sixhobo:
Ukudala isicatshulwa esisisiseko
Kule nqanaba, kufuneka ufumane nokukhuphela iphepha lewebhu lewebhu ngokufanelekileyo. Ukusuka apha, unokwazi ukuthatha amaphepha ewebhu uze ukhiphe ulwazi olufunayo kubo. Iilwimi ezahlukeneyo zokufunda zinokukwazi ukufezekisa oku. Umqhubi wakho kufuneka akwazi ukubhala ngaphezulu kwekhasi elifanayo, kunye nokukwazi ukugcina idatha ngeendlela ezahlukeneyo.
Kufuneka uthabathe iqela leStray of spider. Ngokomzekelo, igama lethu lesigcawu yi-brickset_spider. Imveliso kufuneka ibonakale ngathi:
ipayipi yokufaka ipayipi
Le khowudi yekhowudi yiPython Pip enokuthi ifane ngokufana nomtya:
Lo mgca udala ulawulo olutsha. Ungakwazi ukuhamba kuyo kwaye usebenzise ezinye iimyalelo ezifana negalelo lokuthintela ngale ndlela: